Are the specially trained commandos used to attack the Yangon Masjid last night? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Singapore and Myanmar Governments should take action on this kind of criminal Instigator
ချိုတူးဇော်-“ကျနော်တို့ပြည်သူတွေဟာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ခရီးသွား ဆယ်ဦးကို သတ်တဲ့ လူသတ်ကောင်တွေ ဖြစ်ကြရတော့မယ်” »
Are the specially trained commandos used to attack the Yangon Masjid last night?
If correct, it may have done by specially trained commandos.
If gov failed to catch them, be careful, they could even attack in the Parliament or on the Cabinet meeting like SECOND 19th July attack.
သတင်းအပြည့်အစုံမှာ …. ရန်ကုန် ၂း၃၀ … ယနေ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၂း၁၅ အချိန်တွင် ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံ အနီး ပုလဲကွန်ဒိုမျက်စောင်းထိုး ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ် ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ပလီ အရှေ့တွင် ကားတစ်စီး ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရေးတွင် အထူးလေ့ကျင့်ထား သည်ဟုယူဆရသော အရွယ်တူသန်မာ ဖြတ်လတ်သော သူ လူ ၅၀ ခန့်အား ချပြီး အချိန်ကိုက်ပြန်လာခေါ်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများသည် ပလီ၏ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် မျက်နှာစာ အုတ်နံရံအချို့အားဖျက်စီးခဲ့ကြောင်း ပလီပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းသော ဆိုင်တစ်ဆိုင် အပါအ၀င် ဆိုင် ၃ ဆိုင်အားဝင်ရောက်ဖျက်စီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
”အဲဒီလာဖျက်စီးတဲ့သူတွေက သာမာန် အရပ်သားတွေနဲ့ မတူဘူး အတော်လေးကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ် အမိန့်တစ်ခုအောက်မှာ ၀ုန်းကနဲ့ရောက်လာပြီး ဖျက်ကြတယ်ပြီးတော့ ချက်ခြင်း အချိန်ကိုက်လာခေါ်တဲ့ကားပေါ်ကို တက်ပြေးသွားကြတယ်ဟု အရပ်အမောင်းတွေက ကောင်းတယ် တညီတည်းပဲ တော်တော်စနစ်တကျ လာဖျက်သွားတာ” ဟု ပလီပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ မျက်မြင်သက်သေများမှ myanmarmuslim.net အားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြို့တော်ခမ်းမ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးနှင့် လုံထိမ်းအဖွဲ့ အပါ အ၀င် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ ကြီး ၅ ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ မှ ၂၄ နာရီ အခြေအနေအား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသော်လည်း အဆိုပါ ဖျက်စီးခံရမူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ မတွေ့ရသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Tags: Asia, Bangladesh, Burma, Muslim, Myanmar, Rakhine State, Rohingya people, Yangon
This entry was posted on June 16, 2012 at 3:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.